दिल्ली जीवन | Wagle Street Journal
Category Archives: दिल्ली जीवन
दिल्ली आउनुभएको छ भने तपाईँ पहाडगन्ज नपुगेको पत्याउँदै नसकिने कुरा हो । नेपालीको कुरै छाडौ‌, भारतीय राजधानी आउने कुन विदेशी त्यहाँ पुगेको हुँदैन ? यता नआएका नेपालीलाई पहाडगन्ज चिनाउन कतिपयले ठमेलको सहयोग लिन्छन् । काठमाडौंको त्यो पर्यटकीय जमघटस्थलको दिल्लीस्थित समकक्षी हो, पहाडगन्ज । तुलनात्मक रूपमा कम पैसा लिएर घुम्न निस्कने ‘बजेट टुरिष्ट’हरूलाई ठमेलले जस्तै अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय खाना र सस्ता कोठाको प्रस्ताव गर्छ, पहाडगन्जले । फरक यत्ति हो, ठमेलमा १० हजार भारतीय काम गर्दैनन्, पहाडगन्जमा झन्डै १० हजार नेपाली काम गर्छन् । लगभग ७ सय होटल छन् यहाँ जसमध्ये- यो त्यति गौरवपूर्ण कुरा होइन, तैपनि- १० वटाजति नेपालीले सञ्चालन गरेका छन् । सञ्चालन भन्नाले मालिकै भएर चलाएको । भान्से, वेटर, रिसेप्सनिस्ट, भाडा माझ्ने र चौकिदार भएर पहाडगन्जका होटल चलाउने नेपालीको संख्या त अघि उल्लेख भइहाल्यो । Continue reading →
दिल्लीमा बन्दिपुरको अटोवाला
‘तपाईं जानुस् एकचोटि’ उनले आफ्नो गाउँ बन्दिपुर, तनहुँको प्रशंसामा भने- ‘जिन्दगीमा भुल्नुहुन्न ।’
२० वर्ष भयो उनले त्यो गाउँ (‘वार्ड नं ६’) छाडेको । तर पर्यटकीय बस्तीको प्रबर्द्धन गर्न उनी दिल्लीमा पनि छाड्दैनन् । यो होमबहादुर थापामगरको कथा हो जो थुप्रै गरबि नेपाली र आप्रवासी कामदारहरूको जस्तो संघर्षले भरिएको छ । फरक यत्ति हो, धेरै त्यस्ता अभागी निराशाले आजित भएर संघर्षको यात्रालाई बीचैमा छाड्छन् र गरबीमा डुब्छन् । होमबहादुरले त्यसो कहिल्यै गरेनन् । त्यसैले आज उनी दिल्लीमा सगौरव तीनपाङ्ग्रे टेम्पो (अटोरिक्सा) चलाउँछन् जसलाई यहाँको लोकपि्रय लवजमा अटो भनिन्छ । त्यो अटो जो अबका केही महिनामा पूर्णतः होमबहादुरकै स् वामित्वमा आउनेछ । अहिले किस्तामा तिर्ने पैसा त्यसपछि नाफाका रूपमा दिल्लीस्थित सानो तर उनको आफ्नै घरको बाकसमा जानेछ । २० वर्षअघि बन्दिपुरबाट भागेर भारतीय राजधानी आउँदा होमबहादुर यो दिनको कल्पना मात्र गर्न सक्थे ।
भारतीय सेनाबाट बीचैमा निस् केका बाबुले रक्सीको सुरमा कुटपिट गर्न थालेपछि सहननसकेकी उनकी आमा नजिकैको जंगलमा झुन्डिएर मरनि् । उनी १२ वर्षका थिए । दुई दाजुहरू बिहे गरेलगत्तै छुट्टएपछि, उनी र कान्छा भाइ बाबुसँगै रहे । ‘घरको ढिकी जातोदेखि सबै काम मेरो काधमा आयो,’ उनले सम्भिए, ‘स्कुल पढ्दा पनि मलाई धेरै परेसानी भयो ।’ दाउरा बेचेर उनले जसोतसो ८ क्लास पास गरें तर त्योभन्दा माथि उनले कुनै भविष्य देखेनन् ।
दिल्लीबाट बिदामा फर्किएका एकजना साथिको उक्साहटमा उनी सन् १९८९ मा भारत भागे । यहाँ आएर उनले लोकप्रिय लवजमा कोठी भनिने अपार्टमेन्टमा घरेलु कामदारको जिम्मा सम्हाले- मासिक अढाई सय रुपैयाँमा । उनी १७ वर्षका थिए । ‘बच्चाहरूको स् याहारदेखि टट्टी पनि सफा गरियो,’ उनले सम्भिए । मालिकले एक सय रुपैयाँ तलब नबढाइदिँदा उनले त्यो काम छाडे र नजिकैको अर्को राज्य हरियाणाको इँटा भट्टीमा चार सय रुपैयाँमा काम थाले ।
हो त्यहीँ एकदिन होमबहादुरलाई कसैले नेपाली स्वरमा बोलायो । लामो नाक हुने बाहुनहरूलाई नेपालीका रूपमा भारतमा चिन्न गाह्रो पर्छ तर, होमबहादुरका अनुसार, गुरुङ, मगरहरूलाई झ्वास्सै चिनिन्छ । ‘नेपाली भनेपछि यस्तो लाग्छ कि परदेशमा हेर्नुस् एउटै कोखबाट निस् केका दाजुभाइभन्दा पनि प्यारो,’ उनले भने- ‘आफ्नै दुस्राथरीजस्तो लाग्दोरहेछ ।’
हरियाणाको कुनै एउटा गाउँमा दूध दुहुने, गोबर सोहोर्ने ती गोठाला पनि कामबाट आजित भएका थिए । एसएसली उत्तीर्ण ती युवक र भट्टीको कामबाट असन्तुष्ट होमबहादुरले योजना बनाए जसले उनीहरूलाई दुःखपूर्ण यात्रामार्फत मुम्बई पुर्‍यायो । त्योभन्दा अघि दिल्ली रेलल्वे स्टेसनमा उनीहरू बडो चलाखीपूर्ण ढंगमा लुटिए ।
‘गाउँको मान्छे सहरमा आउँदा अल्मलिएछौं,’ उनले भने, ‘सायद चाँदनी चोकतिर पुगेछौं क्यारे । ’ हिँड्दै गर्दा उनीहरूले एक अर्का नेपाली भाषी भेट्टाए जसले आफू पनि मुम्बई जान लागेको बताए । लगत्तै उनीहरूले अर्का नेपालीभाषी भेटे जसले आफू आसामबाट आएर घरेलु कामदार बनेको तर पैसा नमिलेपछि केही सामान बोकेर हिँडेको बताउँदै एउटा पोको देखाए । ती व्यक्तिले पोकोमा तीन लाखसम्मको सुन र पैसा भएको र त्यो सबै चारजनाले बाँडेर खानुपर्ने विचार राखे । भोकाएको हुनाले तत्कालै आफूलाई पैसा चाहिएको ती व्यक्तिले बताएपछि र भेटिएको पहिलो मान्छेले त्यसमा जोड दिएपछि होमबहादुरले १४ सय रुपैयाँ दिए । अनि ती दुवै नयाँ व्यक्ति खाने र पिसाब फेर्ने बाहनामा छुट्टिए । केही बेरमा होमबहादुर र उनका गोठाला साथीलाई शंका लाग्यो । ‘दिल्लीमा ठग, मुम्बईमा गुन्डा हुन्छ भन्ने सुनेका थियौं,’ उनले सम्झिए- ‘पोको खोलेर हेर्‍यौं । अखबारै अखबार पो छ । लालचले त्यस्तो गर्‍यो । कति महिना लगाएर कमाएको पैसा एकछिनमा गयो ।’
पुराना ती कुरा सम्झिदा उनी हाँसे । मलाई पनि लाग्यो कुनै ठट्टा सुनिरहेको छु । खासमा त्यो दिन दुई जनासँग बाँकी रहेको थियो- १३ सय रुपैयाँ ।
रेलको साधारण डिब्बामा उभिने ठाउँ भएन । ‘सिट खोजियो तर जनरल डिब्बामा कताबाट पाउनु,’ उनले भने- ‘नेपालीले कहिल्यै ट्रेन देखेको भए पो थाहा हुनु ।’ कसोकसो उनीहरू दुई डिब्बा जोडिने ठाउँमा भुइँमै बसे रातभर । बिहान गन्ध कताबाट आउँछ भन्दा आफ्नै जीउबाट । नजिकैको शौचालयबाट आउने छिट्टा उनीहरूको जीउभरी परेछ । ‘धेरै कपडा थिएन,’ उनले भने- ‘तिनैलाई धुँदै सुकाएर लगाइयो ।’
डिब्बा चहार्दै उनीहरू कसोकसो वातानुकूलितमा पुगे र खाली सिटमा झ्याप्पै बसे । टिकट परीक्षक (टीटी) ले गालामा थप्पड मारेपछि मात्र उनीहरूले चाल पाए बिनाटिकट बस्न नहुने कुरा । मुम्बई ओर्लना साथ उनीहरूले सय रुपैयाँ जति सर्टको कलरमा लुकाएका थिए ।
मुम्बई, उनीहरूको सपनाको सहर । कत्ति रहर थियो त्यहाँ जाने । ‘सागर देख्नको बहुत सोख थियो,’ होमबहादुरले भने- ‘फिल्ममा हिरो हिरोइन सागरमा नाचेको देखेको । भर्खरको केटा मान्छे, रहर थियो हेर्ने । ’ टाउको निकै दुखेको थियो तर समुद्र किनारमा डुल्दै र सहर खोतल्दै गर्दा समय बितेको पत्तै भएन । रमाइलो धेरैबेर टिकेन । साँझपख सडकमा हिँड्दै गर्दा एउटा ट्याक्सी अचानक रोकियो र दुईजना निस्के । तिनीहरूले होमबहादुर र उनका साथीलाई समातेर भित्र जाके । ”साले नेपाली लोग कहा से आते हो, तुम लोग स्मलगिङ् कर्ता है इधर’ भन्दै ड्याम का ड्याम पिट्न थाले,’ उनले भने, ‘त्यतिखेर हामीलाई हिन्दी पनि राम्रोसँग बोल्न नआउने । उनीहरूले पुलिसको सीआईडी हौं भनेपछि हामीले पनि ‘तलासी लेओ, गल्ती भए जेल हाल’ भन्यौं । ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ ‘यी गरबि रहेछन्, छाडिदेओ’ भन्थ्यो, तर तिनले सुनेनन् । मेरो सानो रेडियो, घडी र दुई सय लगे । ट्याक्सी हिँडिरहेको थियो, हामीलाई नाङ्गै बनाइदिए नि । कट्टु पनि फुकाले ।’ धन्न, ट्याक्सीबाट उनीहरूलाई निकालिँदा कलरमा लुकाएको पैसा अझै थियो ।
भोकाएका र त्रसित उनीहरूले नजिकैको एउटा पसलमा बडापाउ खाएपछि सहरमा टिक्न नसकिने निष्कर्ष निकाले । बिनाटिकट दिल्ली फर्किने सोचले उनीहरू रेल्वेस्टेसन पुगे जहाँ अर्का एक नेपालीभाषी भेटिए । अब उनीहरू कुनै पनि नेपाली-सँग कुरा गर्न तर्सिसकेका थिए । तर संसार नराम्रा मान्छेहरूले भरएिको छैन । ती व्यक्ति सहयोगी निस्किए । तिनले दुवैलाई एउटा निर्माणाधीन भवनमा चौकीदारीको जागिर दिलाए । त्यसअघि उनले ‘यतातिर कान्छीहरू पाइन्छ गाउँले हो’ भन्दै रेडलाइट क्षेत्रतिर लगेका थिए जसले होमबहादुरहरूमा शंका उब्जाएको थियो ।
केही समयपछि होमबहादुरले कपडा रंगाउने एउटा कम्पनीमा काम पाए जहाँ उनले खुबै प्रगति गरे । पैसा पनि जम्मा गरे साढे नौ हजार । त्यसमा केही थपेर मुम्बईमा थोरै जग्गा किन्ने उनको योजना थियो । तर सबै योजना कहाँ सफल हुन्छन् ? उनैले जागिर लगाइदिएको एकजना नेपालीले त्यही कारखानामा काम गर्ने एउटी भारतीय युवतीलाई भगाएर उनको कोठामा ल्यायो । दुवैको प्रेम भरपर्दो रहेको पक्का भएपछि होमबहादुर उनीहरूलाई पुर्‍याउने रेल्वे स्टेसन गए । कोठामा अर्को एकजना परिचित भारतीय थियो । स्टेसनबाट फर्किदा त्यो भारतीय गायब, पैसा पनि गायब । अर्को बज्रपात, बेलुका युवतीका परिवारजन आएर होमबहादुरलाई धम्की दिए । प्रहरीले पनि छापा मार्‍यो । जागिर पनि छाड्नुपर्‍यो । विरक्त होमबहादुर फेरी एकपटक केही गरिछाड्ने दृढता लिएर दिल्ली आए । ‘कुछ न कुछ सिक्छु, केही गरेर देखाएर मात्रै गाउँ फर्किन्छु भन्ने जिद थियो, तमन्ना थियो,’ उनले भने- ‘या कुछ भी सम्झिनुस् ।’
सन् १९९५ मा दिल्ली फर्केपछि उनले गाडी चलाउन थाले जो उनले मुम्बईमै सिकेका थिए । प्रत्येक महिना पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरेर उनले दुई बर्षमा पश्चिमी दिल्लीमा किस्ताबन्दीमा थोरै जग्गा किने । अर्को वर्ष उनले त्यहाँ सानो झुपडी बनाए र घर गए । १७ मा भागेको केटो २६ को हुँदा फर्कियो । ‘जे जस्तो भए पनि आफ्नो नेपाल भनेपछि, सुनौलीबाट छिर्नेबित्तिकै यस् तो लाग्यो कि म दुस्रा दुनियामा छिर्दै छु,’ होमबहादुरले सम्झिए, ‘आफ्नो घरमा छिर्दै छु । आफ्नोपन क्या आफ्नोपन । नरकबाट स्वर्गमा जाँदै छु जस्तो लाग्ने । तर फेरी पनि के गर्ने, पेट छ, काम गर्नैपर्‍यो ।’
उता बाबुलाई भारतीय सेनाले पेन्सन दिन थालेछ । तर होमबहादुरको योजना गाउँ बस्ने थिएन । उनले बिहा गरे ‘साट्ट सुट्ट मागेर’ र आनन्दले खान पुग्ने जमिन बन्दिपुरमै छाडी श्रीमतीलाई लिएर फर्किए दिल्ली । त्यतिन्जेलसम्म उनलाई अरूका लागि काम गर्ने सिलसिलाबाट दिक्क लागिसकेको थियो ।
‘मलाई नोकरीबाट खुबै तङ् आयो,’ एउटा कामबाट अर्कोमा उफ्रिदाका सास् ती सम्झिदै उनले भने- ‘सानो कुरामा निकालिदिन्थ्ये मालिकहरूले । खुबै गाली गर्थै । नोकरी भन्ने चिज अरूको गुलामी रहेछ भन्ने लाग्थ्यो । नेपालीलाई पनि बुरी नजरियाले हेर्ने । कति वचन लगाउने । ‘तेरे नेपालमे केही नहीँ, खाने कुरा नही मिल्ता’ भन्थे ।’
गाली गलौज त अहिले पनि हुन्छ भारतका सहरहरूमा मजदुरी गर्ने होमबहादुरजस्ता नेपालीहरूलाई । हेपाइ त नेपालका ठूलै भनाउँदा नेताहरूले पनि अनुभव गर्नुपर्छ दिल्लीमा आशीर्वाद लिन आउँदा । तर न होमबहादुरहरू मजदुरीका लागि यहाँ आउन छाड्छन् न नेताहरू । दिल्ली फर्केपछि होमबहादुरले अरूको काम गर्ने दैनिकीलाई निरन्तरता दिए ।
तर तीन वर्षअघि होमबहादुर प्रगतिको अर्को खुड्किलो उक्ले । उनले प्रतिमहिना आठ हजारको किस्ताबन्दीमा एउटा अटो किने जो यो वर्षको अन्त्यसम्ममा चुक्ता हुनेछ । मूल्य सवा लाख थियो तर दलालमार्फत लिएकाले बढी तिनुपर्‍यो । त्यसमा उनलाई गुनासो छैन । सरदर १५ वर्ष टिक्ने आफ्नो अटो ‘आफ्नै मर्जीमा’ चलाउनु उनका लागि ‘नोकरीभन्दा कताकता राम्रो’ छ । अटोले अहिले औसत मासिक १५ हजारसम्म कमाउँछ । उनी ‘घरको ब्यालेन्स हेरेर’ कहिलेकाहीँ ‘बिहान ६ देखि राति दुई बजेसम्म’ पनि काम गर्छन् कहिले मजाले परिवारसँग बिदा मनाउँछन् ।
नौ वर्षअघि बाबुको मृत्यु भएपछि होमबहादुरले भाइ र बुहारीलाई पनि दिल्ली ल्याएका थिए । बिजुली वायरङि् को काम गर्ने भाई र उनीहरूका दुई साना छोराछोरीका अभिभावक भएका छन् होमबहादुरका बूढाबूढी । कुनै कुराको कमी छ भने एउटा सन्तानको छ जसका लागि उनीहरू भगवान्सँग प्रार्थना गररिहेका छन् । अन्तर्वार्ताको एकदिन पछि मैले होमबहादुरलाई उनको घरैनजिक भेट्टाउँदा उनी एकजोर परेवा किन्न र एकजना नेपाली धामीको स्वागत गर्न तयार थिए । ‘डाक्टरले हुन्छ तेरो बच्चा भन्छ तर फेरि किन हुँदैन भनेर धामी झाँक्री गर्न आँटेको,’ उनले भने- ‘ मलाई त केही छैन तर आइमाईको इच्छा पूरा गर्नैपर्‍यो ।’
डेढ करोड मान्छे बस्ने दिल्लीमा लगभग ६० हजार एकै रंगका ( हरियो र पहेंलो मिश्रण) अटो छन् जो तुलनात्मकरूपमा वातावरण मैत्री सीएनजी (ग्यास) बाट चल्छन् । भीड हुने बस चढ्न नसक्ने र कार नहुने मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गका लागि अटो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हुन् । अटो चलाउनेहरू मुख्यतः छिमेकी राज्यहरू यूपी, विहार र अन्य उत्तर भारतीय गाउँहरूबाट आउँछन् । होमबहादुरलाई फेला पार्ने क्रममा पाँच नेपाली अटोवाला मेरो सम्पर्कमा आए । सहरका कुनाकुनाबारे जानकारी हुने र तिनै सडकमा थुप्रैपटक दौडिने भए पनि अटोवालाका लागि प्रत्येक दिन नयाँ हुन्छ । ‘दिनमा छत्तीसथरीका मान्छे भेटिन्छन्, छत्तीस तरहका बात हुन्छन् हेर्नुस्,’ होमबहादुरले भने- ‘त्यसमा सबै नराम्रो पनि होइन । कतिले चाहिँ अटोमा बस्नेबित्तिकै ‘कहाँ को ?’ भन्छन् । कहिले सिक्किमको, कहिले हिमाञ्चल र दार्जिलिङ्को भनिदिन्छु । नेपाली भन्दा अलि अर्कै किसिमले हेर्छ । सिक्किमबाट आएको भन्दा ‘डेनीको जान्ते हो ?’ भन्छन् । ‘उसको घर नजिकै मेरो घर हो’ भनिदिन्छु ।’
हल्का कपाल र जुँगासहित चिउडे दाह्री राखेका होमबहादुर क्याप लगाउँछन् जसको अर्थ छ । मुस्लिम इलाकामा पुग्दा उनलाई मान्छेले दाह्री देखेर ‘भाइजान’ भन्छन्, सरदार बस्तीमा स्नेहसाथ ‘पाजी’ भनी बोलाउँछन् । फेसन र बोलीमा जतिसुकै सतर्कता अपनाए पनि कहिलेकाहीँ तीता घटना भइहाल्छन् । अन्तर्वार्ताको चार दिनअघि उनलाई हल्का मातेको एउटा प्रहरीले ‘तु साले नेपाली इधर क्या कर्ता है’ भन्दै मुख छाड्यो । केही बेर गाली सहेका होमबहादुरले पनि आइलाग्नेमाथि जाइलाग्ने तवरमा मुख छाडेपछि ऊ हच्कियो ।
आफ्नो ठाउँ होइन यो, होमबहादुरलाई थाहा छ । दुई दशक भारतमा बिताएपछि अब उनलाई लगभग पुगेको छ यहाँको बसाइ । किस् ता चुक्ता गरेपछि एकाध वर्ष पैसा कमाउने र बन्दिपुर फर्किने उनको योजना छ । ‘दुनियाँ देखियो,’ उनले भने- ‘तर आफ्नो देश, मातृभूमि भनेको मातभूमि हुँदो रहेछ । आउँदो पीढीले परदेसिनु नपरोस् भन्ने चाहन्छु । जति दुःख गरे पनि उतै गर्नु ।’
आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो बन्दिपुर । एकचोटि पुग्नेले त जिन्दगी भुल्दैन, त्यही जन्मेकोले बिर्सने कुरै भएन ।
भाइ बुहारी उनीहरुको छोरा र पत्नीसँग
यो लेख पहिलो पल्ट आजको कान्तिपुर परिशिष्ट कोशेलीमा प्रकाशित भएको हो । पत्रित्रकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ क्लिक गरौ‌‌‌ ।
१. A Tale of Two Drivers: Delhi Autowallah and Shillong Cabbie
This entry was posted in दिल्ली जीवन, नेपाल-भारत सम्बन्ध and tagged अटोवाला, दिल्ली, नेपाली, बन्दिपुर, भारत on December 26, 2009 by Dinesh Wagle.
सुन्नुहोस् मौसमसम्बन्धी समाचार- दुई हजार २५ सय मिटर अग्ला पूर्वी नेपाली पहाडमा जन्मेहुर्केको र साढे १३ सय मिटरमा अवस्थित काठमाडौंमा बढे-पढेको मलाई समुद्री सतहबाट २ सय ३९ मिटरमात्रै अग्लो दिल्लीको गर्मीले आश्चर्यचकित हुनेगरी चेताउनु खासै नौलो कुरो नहुन सक्छ । तर यहाँ चकितपनाले सीमा नाघ्नै लागेको भान हुन्छ । शुक्रबार दिल्लीको तापक्रम अधिकतम ४०/न्यूनतम २८ छ भने, म मेरो आइफोनमा आखाँ ठूला पार्दै हेर्छु, काठमाडौंको २७/१३ छ । दिल्लीको न्यूनतमभन्दा पनि काठमाडौंको अधिकतम कम भएको तथ्य यो चर्को गर्मीमा पिल्सिएको बेला हत्तपत्त पत्याउनै गाह्रो पर्दोरहेछ । सोमबार यहाँ ४४ डिग्री पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने काठमाडौंमा २९ । Continue reading →
स्लमडग मिलिनायरको हविगतमा दिल्लीका झुपडबस् तीमा बस् ने नेपालीको कथा-व्यथा पनि कम्ती दुःखदायी छैन ।
‘धेरै वर्स्ट छ,’ ‘खराब’ अर्थ दिने अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्दै हिन्दी लवजमा सुरज रानाले भने, ‘मैले सोचेको यो झुकी टुटोस, यहाँबाट फटाफट निस् कम । यहीँ खाने, यहीँ बस्ने, त कहिल्यै अगाडि बढ्दैन ।’
सोच्ने क्षमता विकास भएदेखि सुरजले मनमा त्यस्तो कुरा खेलाउन थालेका हुन् । अहिले उनी १५ वर्षका भए । दिल्लीको यही झुप्रेबस्तीमा उनी जन्मिए, यहीँ हुर्किए, यहीँ खेले, यहीँबाट स्कुल गए र यसपालि १० औं कक्षाको परीक्षा दिँदैछन् । ठ्याक्कै उनी जन्मेकै झुप्रो चाहिँ १० वर्ष अघि नष्ट गरएिको थियो । औद्योगिक क्षेत्र ओख्लाको फेज-२ अन्तर्गतको त्यो ठाउँमा अहिले एउटा बहुतल्ले अफिस भवन छ । त्यसैको कम्पाउन्डसँग जोडिएको खँदिलो, नाला तथा फोहोर व्यवस्थापन नभएको र मुख्यत झ्याल विहीन सयौं साना झुप्रा छन् । तिनैमध्येको एउटामा सुरज आफ्ना दुई दिदी र बाबुआमासँग बस्छन् ।
व्यापकरूपमा ‘स्लम’ भनिने यी झुप्रेबस्ती खासमा भारतीय गरबिीका प्रतीक हुन् । कतिपय भारतीयले ‘झुग्गी झोपडी’ भन्ने यी बस्तीमा मुख्यतः गाउँबाट कामको खोजीमा सहर पुगेका मानिस बस्छन् जो न्यून तलबमा निम्नस्तरको काम गर्छन् । (‘झुग्गी’ लाई प्राय सुरजले जस्तो ‘झुकी’ पनि उच्चारण गरिन्छ ।) भारतमा एसियाको सबैभन्दा ठूलो स्लम छ जहाँ झन्डै १० लाख मानिस बस्छन् । धारावी नामको मुम्बईको त्यो स्लममा यसपालि ओस्कार जितेको फिल्म ‘स्लमडग मिलेनियर’ को छायाङ्कन गरएिको थियो जसले स्लमको जिन्दगीलाई यसअघि कहिल्यै नमिलेको प्रचार र ‘ख्याति’ दिलायो । मुम्बईमै अरू थुप्रै स् लम छन् जहाँ अरू लाखौं बस्छन् । -विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्लम किबेरा चाहिँ केन्याको नाइरोबीमा छ । त्यहाँ २२ लाख मानिस बस्छन् ।) झन्डै डेढ करोड जनसंख्या भएको दिल्लीमा छरएिका स्लमहरूमा ३० देखि ३२ लाखसम्म मानिसहरू बस् ने तथ्याङ्क छ । गाउँको गरबिीबाट पिल्सिएर भारतमा रोजगारीका लागि आउने कतिपय नेपाली यिनै स्लममा बस्छन् । तीनैमध्येका एक हुन् सुरजका बाबु दिलबहादुर राहुँ जो बितेका २२ वर्षदेखि ‘जनता-जीवन क्याम्प’ भनिने यो स्लममा बसिरहेका छन् ।
‘अब उही भनौ न,’ ४१ वर्षे दिलबहादुरले आफू कसरी झुग्गीमा आइपुगे भनी बताए- ‘मेरो त आफ्नो समस्या थियो तर कुल मिलाएर हेर्ने हो भने रोजीको समस्याले आइयो ।’ Continue reading →
This entry was posted in कोसेली, दिल्ली जीवन and tagged गरिबी, स्लमडग, delhi, india, nepali, poverty, slum, slumdog on March 14, 2009 by Dinesh Wagle.
यसै महिनाको सुरुतिर मैले नयाँदिल्लीको मेट्रो रेल चढ्नु पछाडि दुई कारण थिए । पहिलो, द्वारकाबाट सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट पुग्न सबैभन्दा सजिलो यातायात माध्यम त्यही थियो । मेट्रोको अन्तिम स्टेसन सेक्रेटेरियटबाट म बसमा जंगपुरा एक्स्टेन्सनको फल्याटमा पुग्न सक्थेँ । दोस्रो, संसारकै उत्कृष्ट मध्येको एक सहरी यातायात प्रणाली भनि व्यापक रूपमा वर्णन गरिएको प्रख्यात मेट्रो हेर्न चाहन्थेँ म । शंकै छैन, दिल्लीको गज्जवको रेल प्रणाली भारतीय राजधानीका शीर्ष पर्यटकीय गतव्य मध्येको एक भएको छ । बेला-बेला अाइफोनमा इन्टरनेट ब्राउज गर्दै ३० किलोमिटर जतिको दूरी यात्रा गर्दा मैले सुविधासम्पन्न टे्रन डिब्बाभित्रको जीवन्त वातावरणको मात्रै मजा लिइन, तीन तले घरको उचाइबाट सहरको अवलोकन पनि गरेँ । अग्ला र मोटा खम्बामा अडिएको रेल ट्रयाक सडक माथिबाट जान्छ । तल सडकमा ठाउँ र गतिका लागि तँछाड-मछाड गर्ने गाडीहरू तिनका चालक र यात्रुलाई थकाई लागुन्जेल रातो बत्तीमा अड्किन्छन् । माथि वातानुकूलित डिब्बाका यात्रुलाई ट्राफिक जामसँग मतलवै भएन । Continue reading →